Accueil > Gazetin'ny nosy > Nty sy Nday: Mangarahara sa ankinafinafina ?
Nty sy Nday: Mangarahara sa ankinafinafina ?
Nanaitra ny maro ny fahenoana fa nampitandrina ny mpiasam-panjakana ny minisitra ny Vola, Vonintsalama Andriambololona, ny amin’ny tsy maintsy hanajana ny tsiambaratelon’ny antontan-taratasim-panjakana. Ny anton’io fampitandremana io dia tsy inona akory fa vokatr’ilay antontan-taratasy nirakitra ny fandaniam-bola avy amin’ny tsenambaro-panjakana (Marché public), izay nahitana soritra fa tamin’ny taom-piasana 2016 dia nisy fandaniana mihoa-pampana tao amin’ny ministeran’ny Filaminam-bahoaka. Tsy inona io fa ilay hoe nananika ny 9.000 tapitrisa ariary (9 Miliara ariary) ny vidin’ny kojakoja fanolo sy kodiarana ho an’ny fiara 4×4 iray tao amin’io ministera io. Voatery nitondra fanazavana moa ny tompon’andraikitra fa hoe nisy fahadisoana ny fanoratana ka nihoatra « zéro telo ».
Manahirana ny mieritreritra izany tranga izany. Ny mahamaika ny tompon’andraikitra dia ny tsy hivoahan’ny antontan-taratasim-panjakana ka ho fanta-bahoaka ny voarakitra ao na marina na diso. Ny vahoaka kosa anefa dia milaza fa “efa andron’ny mangarahara izao ka raha mbola tsy hanohintohina ny fiarovam-pirenena na sanatria loza hanjo ny vahoaka, dia tsara ihany raha tsy tompon-trano mihono ny rehetra”. Eo izany no mahatonga ny fanontaniana hanitikitika ny fisainana hoe “hampanjaka ny mangarahara ve isika sa mbola hanome vahana ny kiantrano antrano sy ny ankinafinafina ihany?” Marihina aloha fa matoa nasiana ny sampan-draharaham-panjakana mpisafo ny raharaham-panjakana na ny “Inspection générale de l’Etat” sy ny rafi-pitsarana natokana hikirakira sy handinika ny antontan-taratasim-pitantanam-bolam-panjakana (Cour de comptes – Tribunal financier) dia mba hanaraha-maso ny tontolon’ny fitantanam-bolam-panjakana isan-tsehatra izany. Ka nahoana moa no ho fady ny fahafantaran’ny vahoaka ny fandehan’ny fitantanana ny volany? Aza hadinoina fa na ny fandinihan’ny solombavambahoaka ny tontolon’ny fitantanana ny volam-panjakana amin’ny alalan’ilay antsoina hoe “Loi de règlement” aza ange ka amin’ny anaran’ny vahoaka no anaovan’ny Antenimierampirenena azy e! Dia nahoana no ilay vahoaka tompon’ny vola indray no ho tompon-trano mihono amin’ny fitantanana ny volany? Ny marina dia manahy ny voninahiny sy ny tombontsoany manokana ho very ny mpitondra dia mampiasa ny fahefam-panjakana handrahonana ny mpiasam-panjakana mba tsy hamoaka ny voarakitra ny antontan-taratasim-panjakana, toa ireny niseho farany teo ka nibaribarian’ny volabe nahodinkodina na nangalarina.